एक चिनियाँ पुरुष जासुसको कथा : जो १८ वर्ष सम्म श्रीमती बनेर बच्चा समेत जन्माए । - Dial 100 News
बायाँबाट बर्नार्ड बर्सिकट र सी पी पु
जासुसीको दुनियाँमा अनेक कहानीहरु सुन्ने गरिन्छ। कतिपय कहानी यस्ता हुन्छन जो हामीलाई पत्याउन समेत मुस्किल पर्ने गर्छ। त्यस्तै एक पत्याउनै नसकिने कहानी हो पुरुष चिनियाँ जासुसको। जो १८ बर्षसम्म फ्रान्सेली राजदुतावासमा कार्यरत एक कर्मचारीको श्रीमती बने ।
सन् १९६४ जनवरी कोरिया युद्दपछीको समय, जतिबेला पच्चिमा मुलुकहरुले चिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरिसकेका थिएनन् ,त्यतिबेला फ्रान्सले आफ्नो दुताबास चीनको राजधानी बेईजिङ्गमा स्थापना गरेको थियो। २० बर्षीय बर्नाड बर्सिकट सोहि दुताबासको कर्मचारी थिए। २६ बर्षीय सी सँग बर्नार्डको पहिलो भेट दुताबासले आयोजना गरेको क्रिसमस पाटीमा भएको थियो।त्यतिबेला महिलाको पहिरनमा सजिएका सी ले आफुलाई ओपेरा गायक र भाषाको शिक्षक भनेर परिचय दिएका थिए। सो भेटपछी दुवै मिल्ने साथी भए।
पहिलो भेटबाटनै सी प्रति झुकाव राखेका बर्नार्डले एकदिन सी लाई आफ्नो घर बोलाए। त्यसदिन मात्र बर्नार्डले थाहा पाएका थिए सी को पुरा नाम सी पेई पु हो भनेर। सी ले त्यस दिन बर्नार्डलाई आफु छोरीकै रुपमा जन्मिएको तर छोरानै पाउनुपर्ने हजुरआमाको अन्धविश्वासका कारण आफु छोराको जस्तो पहिरन र हाउभाउमा हिंड्न थालेको भन्दै बर्नार्डलाई आफु महिलानै भएको विश्वास दिलाएका थिए। उनले आफ्नो घरमा हजुरआमा र दुई दिदि मात्र रहेको पनि बर्नार्डलाई जानकारी गराएका थिए। त्यस रात उनिहरुबिचमा यौन सम्पर्क समेत भएको कुरा बर्नार्डले अदालतमा बयान समेत दिएका थिए।
बर्नार्डको ४ बर्षीय कार्यकाल पुरा भई मंगोलिया सरुवा भयो। बर्नार्डले बेइजिङ्ग छोड्नै लाग्दा सीले आफु गर्भवती रहेको सुनाएका थिए। मंगोलिया गएको केहि समयपछि बिदाको समयमा बर्नार्ड फेरी बेईजिङ्ग गए। त्यतिबेला सीले आफुले छोरा पाएको भन्दै बर्नार्डलाई एउटा फोटो समेत देखाएका थिए। बर्नार्डले छोरा भेट्न हर प्रयास गरे तर उनि सफल हुन सकेनन। सी ले जनमुक्ति सेनाको डरले बच्चालाईआफन्तको साथमा राखेको भन्दै बर्नार्डलाई झुक्काउँदै आएका थिए। बर्नार्ड छोरा नभेटी मंगोलिया फर्किए। समय बित्दै गयो। बर्नार्डको फेरी बेईजिङ्ग सरुवा भयो।
चाईनिज भाषा सिकाउने बहानामा सी बर्नार्डको निवास आउन थाले। सी लाई महिला सोचेर प्रेम गरिरहेका बर्नार्डले सी लाई झन् धेरै प्रेम गर्न थाले। तीन महिना पुरा भएपछी सी ले आफुलाई अब सरकारले पढाउन रोक लगाएको र अब बाट किङ्ग ले पढाउने भन्दै किङ्ग सँग बर्नार्डको भेट गराएका थिए। बर्नार्ड र किङ्गको यसअघि पनि भेट भएको थियो। बर्नार्डले उनै भाषा शिक्षक किङ्ग सँग आफ्नो पत्नी सी र छोरालाई पेरिस लैजाने उपाय सोध्न थाले। बर्नार्डले अदालतमा दिएको बयान अनुसार किङ्ग लगायतले पत्नी र छोरा फ्रान्स लैजाने हो भने दुताबासका केहि महत्त्वपूर्ण कागजपत्र दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए। पत्नी र छोराको प्रेममा पागल भएका बर्नार्डले सो सर्त मान्न तयार भए र दुताबासका कागजपत्र किङ्गलाई दिन थाले । खासगरी त्यतिबेला चीनलाई रसिया सम्बन्धि फ्रान्स नीतिका कागजपत्र आवश्यक थियो। उनले सन् १९७९ सम्ममा ५०० भन्दा बढि गोप्य कागजपत्र किङ्ग लाई दिएका थिए। सन् १९७९ मा बर्नार्ड सरुवा भएर पेरिस जान्छन। त्यतिबेला सम्मपनि बर्नार्डको छोरा सँग भेट भएको थिएन ।
सन् १९८२ मा किङ्गको सहयोगमा सी र सी दोदो नाम गरेको एक बच्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमको निम्ति पेरिस पुग्छन। उनीहरुको भिसा देखि अन्य सबै प्रबन्ध बर्नार्डले नै मिलाएका थिए। उनले श्रीमती र बच्चालाई पेरिसमै राख्न खोज्छन र पुन:किङ्गको सर्त अनुसार केहि कागजपत्र दिन्छन।
सन् १९८३ जुन ३० का दिन पेरिस प्रहरीको टोलीले बर्नार्डलाई पक्राउ गर्छ। त्यसको केहि दिनमा जासुसीको आरोपमा सी पनि पक्राउ पर्छन। त्यतिबेला सम्म पनि बर्नार्डलाई आफुले युवती सम्झेर प्रेम गरिरहेको सी केटा भएको थाहा हुँदैन। सिको मेडिकल जाँच समेत गरेपछी अदालतले सी पुरुष नै रहेको ठहर गरेको थियो। उनीहरुलाई ६ बर्षको जेल सजाँए सुनाईएको थियो। त्यस लगत्तै बर्नार्डले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेका थिए।
तत्कालिन फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्स्कोस मिटर्याण्डले सन् १९८७ अप्रिलमा सी पेई पु र अगस्टमा बर्नार्डलाई रिहा गरेका थिए। त्यस पछि ओपेरा गायककै रुपमा काम गरेका सिको जुन ३०, २००९ मा पेरिसमै मृत्यु भएको थियो भने बर्नार्ड अहिले पनि जिवितै छन्। यस घटनालाई आधार बनाएर डेभिड हेनरीले सन् १९८८ मा एम. बटरफ्लाई नामक नाटक लेखेका थिए। सन् १९९३ मा डेभिड कोर्नेनवग ले एम.बटरफ्लाई नामक फिल्म समेत बनाएका थिए।
६५७८ जना प्रहरीसहित फ्रन्टलाइनमा खटिएका १२ हजार ७ सय सुरक्षाकर्मीमा कोरोना पुष्टि !
बैतडीमा ४३ जना यात्रु सवार बस दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु !